Tag: Faranca | Sagal Radio Services
Emmanuel Macron oo loo doortay Madaxweynaha Faransiiska
Natiijada doorashada maanta ay u dareereen shacabka dalka Faransiiska ayaa noqotay in Macron uu noqday Madaxweynaha dalka Faransiiska.
Kooxihii ka dambeeyay weerarkii Paris oo ka faa’ideystay qul-qulka qaxootiga Yurub
Ra’iisul Wasaaraha Faransiiska Manuel Valls ayaa sheegay in kooxihii ka dambeeyay weerarkii Paris lagu qaaday todobaadkii hore ay ka faa’ideysteen qaxootiga faraha badan ee ku soo qul qulaya wadamada Yurub.
Howl gallo ballaaran oo ka socda magaalooyin ku yaal Faransiiska iyo 23 ruux oo la xiray
Howl gallo aad u ballaaran ayaa ka soconaya magaalooyinka Faransiiska, iyadoo kumanaan ciidamo oo isugu jira Boolis, ciidamada gaarka u tababaran iyo Milateri ay ka qeyb qaadanayaan howl galada oo dad badan lagu qabtay.
Qaar ka mid ah kooxihii weeraray Paris oo la aqoonsaday iyo dad lagu xiray Belgium
Laamaha Sirdoonka Faransiiska oo wali ku howlan baaritaanka weerarkii habeenkii jimcihii ka dhacay Paris ayaa aqoonsaday qaar ka mid ah kooxihii ka dambeeyay weerarkii dadka faraha badan ku dhinteen ee qaraxyada iyo toogashada ahaa.
In ka badan 120 ruux oo ku geeriyootay qaraxyo iyo toogasho ka dhacday Paris (Sawirro)
In ka badan 120 ruux ayaa lagu soo waramayaa inay ku dhinteen weeraro qaraxyo iyo toogasho xalay ka dhacday magaalada Paris ee Caasimada dalka Faransiiska, iyadoo weerarkan uu ahaa kii ugu xumaa abid soo mara dalkaas.
Baadigoobka loogu jiro labadii nin ee weerartay Xarunta Wargeyska Charlie Hebdo oo maalintii 3aad galay
Ciidamada kala duwan ee Faransiiska ayaa xoojiyay baadigoobka loogu jiro labadii nin ee arbacadii la soo dhaafay weerartay xarunta wargeyska Charlie Hebdo ee ku yaal magaalada Paris, iyadoo labadan nin laga raadinayo waqooyi bari Faransiiska, halkaasoo ay u baxsadeen.
Booliska Faransiiska oo soo bandhigay sawirada iyo magacyada dableydii weerartay Xarunta Wargeyska